Khuburrada teknooloojiyadda ee carruutoodu ka mamnuuca shaashadaha - BBC News Somali
Image caption Canug yar oo wax ka daawanaya teleefoon casri ah
"Uma baahna carruurta in shaashad ay wax ka bartaan balse waxaa loo baahan yahay in maskaxda carruurta tacliin lagu shubo" ayuu yiri Laurent.
Image caption 'Carruurta wax in la baraa xirfadaha noloshooda wax u tarayo balse laga ilaaliyo shaashadda'
Iskuulkan ayaa u ololeeya halkudhiyada uu ugu magac daray 'Waxbarasho wax ku ool ah oo ku aadan 'koriinka maskaxda.
"Maskaxda qofka banii'aadanka kuma kobacdo aqoon laga barto shaashad, waa in aad howl qabataa oo aad isku daydaa si aad wax u baratid" ayuu yiri Laurent.
Image caption Wiil yar oo heysta qalabka ciyaaraha Online-ka
Waxaa uu sidoo kale qabaa in carruurta ay dhibaatooyin ay kala kulmaan teknooloojiyadda balse aanan la dhayalsan karin faa'idooyinka laga dhaxli karo.
Image caption Carruur faraxsan oo ku sugan Iskuulkooda
Ha'yadda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa dhawaan soo saartay talooyin ku aadan carruurta marka ay timaaddo daawashada shaashadda, waxay ha'yaddu soo jeedisay in carruurta aysan wakhti badan adeegsan shaashadda ama qalabyada kale ee lagu madadaaliyo ee leh shaashadda.
WHO waxay soo jeedisay in carruurta ay da'ddodu tahay 2 sanno jir aanan la daawadsiin telefishin ama shaashad, balse carruurta ay da'doodu ka sarrayso 2 jir ilaa 4 jir hal saac oo kaliya ah la daawadsiin karo telefishin maalintii.